स्वास्थ्यका लागि पानी फाइदाजनक हुन्छ की फलको रस ?
हाम्रो शरीरलाई दैनिक कति पानी आवश्यक हुन्छ ? ८ वा १० गिलास । तर, यत्तिका पानी कसरी शरीरमा ग्रहण गर्ने ? अनभिज्ञ छौं। एक अध्ययनले के देखाएको छ भने, हाम्रो शरीरलाई दैनिक आवश्यक पर्ने पानीको मात्रा खानाको माध्यामबाट पूर्ति हुनुपर्छ ।
बुधबार, मंसिर १, २०७८ ८:३५
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। हाम्रो शरीरलाई दैनिक कति पानी आवश्यक हुन्छ ? ८ वा १० गिलास । तर, यत्तिका पानी कसरी शरीरमा ग्रहण गर्ने ? अनभिज्ञ छौं। एक अध्ययनले के देखाएको छ भने, हाम्रो शरीरलाई दैनिक आवश्यक पर्ने पानीको मात्रा खानाको माध्यामबाट पूर्ति हुनुपर्छ ।
अध्ययनले देखाएको छ, धेरै पानी मात्र पिउदा फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा छ । किनभने हामीले पिएको पानीले शरीरको भिटामिन र मिनरल्स पिसाबबाट बाहिर निकाल्छ । त्यो भए के पानी नपिउने त ? होइन, शरीरलाई आवश्यक पानी पिउनैपर्छ । तर, पानीभन्दा पानीयुक्त फल सर्बोत्तम हो । जुन फलमा पानीको मात्रा बढी हुन्छ, त्यसैले शरीरलाई चाहिने पानीको आवश्यक्ता पुरा गर्छ ।
पानीयुक्त फल सेवन गर्दा क्रसम शरीरलाई चाहिने पानी पुग्छ । यसले सधै शरीरलाई पानीको अभाव टारिरहन्छ । – फल मात्र होइन, सागसब्जीमा पनि पानीको मात्रा हुन्छ । त्यसले शरीरमा पानीको आवश्यक्ता पुरा गर्छ । – पानीयुक्त फल र सब्जीले प्रोटिन, मिनरलस, भिटामिन र नुनको मात्रा पनि शरीरमा पुरा गर्छ ।
कुन फल तथा सब्जीमा पानीको मात्रा कति स्याउ (८४ प्रतिशत पानी) स्याउमा यस्तो तत्व हुन्छ, जसले शरीरमा पानीको मात्रा पुरा गर्छ र भोक पनि लाग्दैन । स्याउमा ८४ प्रतिशत पानी हुन्छ । स्याउको सेवनले अनावश्यक धेरै खानाको भारबाट पनि पाचन प्रक्रियालाई जोगाउँछ । केरा (४७ प्रतिशत पानी) – केराको सेवन पनि लाभदायक हुन्छ । यसमा ७४ प्रतिशत पानी हुनका साथै क्याल्सियम, पोटाशियम हुन्छ । यसले जोर्नीको दुखाई हुन दिदैन ।
बैगुन (९२ प्रतिशत पानी) – बैगुनमा ९२ प्रतिशत पानीको मात्रा हुन्छ । यसमा फाइबरमो मात्रा उच्च हुन्छ, जसले पाचन यन्त्रलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्छ । कांक्रो (९५ प्रतिशत पानी) – गर्मीमा कांक्राको सेवन एकदमै उपयोगी हुन्छ । यसमा ९५ प्रतिशत पानीको मात्रा हुन्छ । साथै भिटामिन-सि, फाइबरको पनि स्रोत हो यो ।
अंगुर (९२ प्रतिशत पानी) – अंगुरमा ९२ प्रतिशत पानी हुन्छ । यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ, जसले रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ । खरबुजा (९० प्रतिशत पानी) – खरबुजामा ९० प्रतिशत पानी हुन्छ । यसमा क्यालोरीको मात्रा कम हुन्छ, जसले तौल घटाउनमा पनि सहयोग गर्छ । भुँइकटहर (८७ प्रतिशत पानी) – यसमा पानीको मात्रा ८७ प्रतिशत हुन्छ । साथै एन्टी इन्फ्लमेटरीको पनि स्रोत भएकाले जोर्नीको दुखाईमा राहत दिन्छ ।